छापामार कमरेड संरचना, शिक्षिका रचना बनेपछि ( सफलताको कथा ) - Saitim Khabar
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार १६:४४
२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) पार्टी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । र जनमुक्ति सेना क्यान्टोनमेन्टमा बस्ने निर्णय भएसँगै क. संरचना पनि साथीहरूसँगै चितवनको शक्तिखोर क्यान्टोनमेन्टमा बसिन । आफूले चलाएको हतियारमा यु.एन.ओ. को छाप लाग्यो । हतियार कन्टेनरमा राखियो । र कन्टेनरको चाबी अनमिन (UNMIN) का प्रतिनिधिसँग रह्यो । हतियार कन्टेनरमा राख्दा उनलाई निकै पीर परेको थियो । किनकि हतियार सहिदको रगतसँग साटिएको थियो । उनलाई एक ढङ्गले आश्चर्य पनि लाग्यो । तर पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि थियो । क्यान्टोनमेन्टमा बस्दा पनि थुप्रै आरोह-अवरोह र उतारचढावहरू भए । शुरुमा सरकारले खानै नदिइ तड्पायो । जनमुक्ति सेना ब्यारेकबाट निस्कन बाध्य भयो । फेरि पनि न्यायप्रेमी जनतामा माझ गयो । त्यसपछि बल्ल सरकारसँग व्यबस्थापनको केही सहमति भएपछि जनसेना फेरि ब्यारेक फर्कियो । त्यसपछि कैदीलाई सिदा दिए जस्तो दिनको साठी रुपैयाँ छुट्ट्यायो । अस्तव्यस्त बसाई । हजारौं अभाव । पालको बास । हावाहुरी, असिना पानी । जोगीले कुटी कुरे जस्तै जिन्दगी । अभावै अभाव । यति धेरै समस्याको बाबजुद पनि उनले धेरै संघर्ष गरिन । १३ औं बटालियन बि कम्पनीमा रहेर आफ्नो सैन्य टुकडीलाई कमान्ड गरिरहिन । सहयोद्धाहरूलाई सँधैं विचार, राजनीति र फौजी ज्ञानले धारिलो बनाईरहिन । आदेशको पालना गरिरहिन । आफूले पनि सैनिक जीवनका कठिन कोरसहरू पार गरिन । त्यो बेलासम्म उनी प्लाटून कमान्डर भईसकेकी थिईन । र स्वैच्छिक अवकाशमा निस्कने बेला डिभिजन कार्यालयको संचार विभागमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन । फौजी संगठनको कामसँगै आफ्नो पढाईलाई पनि निरन्तरता दिईरहिन । क्यान्टोनमेन्टमा बस्ने बेला २०६५ सालमा नै उनले एस.एल.सि. पास गरिसकेकी थिइन । स्वैच्छिक अवकाशमा क्यान्टोनमेन्टबाट निस्केपछि पढाईलाई निरन्तरता दिने क्रममा उनले रोशी उच्च मा.वि. बाट बाह्र कक्षा उतिर्ण गरिन । त्यसैगरी मंगल जनविजय बहुमुखी क्याम्पसबाट ब्याचलर उतिर्ण गरिन । र सानो ठिमी क्याम्पसबाट सरासर मास्टर डिग्री उतिर्ण गरिन । यसरी उनको शैक्षिक खुड्किलाहरू थपिँदै गयो । एउटा खालको शैक्षिक स्तर पनि कायम गरिन । यो बीचमा थुप्रै वाधा, व्यवधान र कठिनाईहरूलाई पनि पार गरिन । त्यही भएर पो यो सफलता हात पारिन ।
साहित्यिक यात्रा र साहित्य सृजनालाई निरन्तरता दिने क्रममा विभिन्न संघ-संस्थाहरूबाट सम्मान र पुरस्कारहरू पनि ग्रहण गरेकीछन । उनको जीवनको यी अमूल्य निधिहरू हुन । समावेशी अनलाइन मिडियाद्वारा आयोजित कविता प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार, (२०७५), तामाङ डाजाङ ग्योईकाई पुरस्कार (२०७५) । मातृभाषा कविता छनौट (२०७६) ।यसरी देश र जनताको लागि मृत्यु या मुक्तिको शपथ खाएर हिंडेकी छापामार क. संरचना शिक्षिका रचनामा बदलिएपछि सुन्दर र समुन्नत : समाज निर्माणको काम बिना गतिरोध अगाडि बढीरहोस । सहयोद्धा र हिंजोको उनको एक सानो कमान्डरको तर्फबाट लाख लाख शुभकामना !
डम्बर थामी ‘अनुपम’ १२ चैत्र २०७७, पराईभूमी !